XIDDIGAHA QALALAN EE XILLIGA QABOOBAHA: SIDA LOO QALAJIYO GURIGA EE QALABKA KORANTADA IYO FOORNADA? - WIXII MARTIDA
Iska ilaali isticmaalka khudaarta: sida loo qalajiyo xididada korantada iyo foornada jiilaalka?
Beetroot waa badeecad rasmi ah oo la mid ah caan ku ah hantida bogsoon ee hodanka ah. Xididaynta qalajinta jiilaalka waa nidaam kuu oggolaanaya inaad isticmaasho palette oo dhan dhadhanka iyo tayada caafimaadka leh ee asalka ah sanadka oo dhan.
Sameynta diyaarinta jiilaalka, fiiro gaar ah u saar xididdo. Sidaa darteed, tusaale ahaan, in la qalajiyey khudradda cagaaran oo la jarjaray, waxaa suurto gal ah xitaa inta lagu jiro xilliga qaboobaha qabow si loo diyaariyo suxuunta kala duwan ee xididdo, iyo sidoo kale Sababtoo ah isticmaalka joogtada ah, sii caafimaad qabo. Xaqiiqdu waxay tahay in qalajinta ay tahay habka diyaargarowga, taas oo kuu ogolaaneysa inaad ku badbaadiso 98% dhammaan fitamiinada, macdanta iyo waxyaabaha muhiimka ah ee alaabta cusub.
Sababtoo ah guryaha bogsiinaya, xididdo ayaa si ballaaran loo isticmaalaa. ee daaweynta iyo ka hortagga cudurada kala duwan. Fitamiinada (fitamiinada PP, A, E, vitamin ee B), macdan (macdan, potassium, kalsiyum, fosfooraska, iodine iwm), betain iyo bioflavonoids waxay sameeyaan xididdo aan loo baahnayn qof kasta.
Dalagga rootiga wuxuu leeyahay hanti tijo ah, waxay gacan ka geysaneysaa hagaajinta hawsha dheef-shiidka iyo hababka dheef-shiid kiimikaadka ee jirka.
Beetroot waa daawo aad u fiican oo ku saabsan jirka ee fitamiin C, copper iyo fosfooraska, kaas oo waxay ka caawisaa in laga takhaluso sunta iyo walxaha waxyeelada leh. Faytamiin A, oo ka badan oo ku jira dabocase-hoose, ayaa kaalin aad u muhiim ah u leh hawshooda jirka haweenka.
Isticmaal joogto ah ee xididdo la qalajiyey yaree halista kansarka.
Thanks to vitamin B9, xididada waxaa lagu talinayaa dadka qaba cudurrada wadnaha, iyo sidoo kale ka hortagga cudurrada wadnaha. Qaadashada fitamiinadani waxay saameysaa kororka xajmiga dhiigga ee dhiigga ku jira dhiigga, waxay ka hortagtaa horumarinta dhiig yari iyo leukemia.
Beet waxay leedahay saameyn dib-u-dhalasho, taas oo u sabab ah content sare ee folic acid khudradda. Waa faybiin folicis ah oo kor u qaada awooda unugyada si ay u soo noqoto.
Astaanta kale ee ku lug leh soo noolaynta jidhka bini-aadamka waa quartz. Marka laga reebo guryaha gaboobaha, quartada waxay gacan ka geysaneysaa ilaalinta caafimaadka xididdada dhiigga., lafaha iyo maqaarka.
Dadka ku dhacaya barar (haynta dheecaanka jidhka) ayaa lagu muujiyey inay maalin kasta cunaan dabocase, labada foomka saafi, iyo sida qayb ka mid ah suxuunta khudradda. Sababtoo ah guryaha lagu durayo ee xididdada xididada ayaa faa'iido u leh dadka cayilan.
Midnimada ee xididka waa in ay awooddo in ay nadiifiso kelyaha, beerka iyo mindhicirada laga helo sunta iyo sunta. Sababtoo ah ka kooban, xididdo ayaa saameyn togan ku leh shaqada unugyada maskaxdataageeridda caafimaadka maskaxda.
Maaddooyinka ku jira badeecadda waxay xoojisaa derbiyada guntooda, wuxuu ku tiriyaa xididdada dhiigga, wuxuu leeyahay saameyn saa'is ah oo anti-sclerotic ah. Dhakhaatiirtu waxay kugula talinayaan cunista xididada sida wakiilka daweynta iyo daaweynta ee atherosclerosis, hypertension iyo cudurro kale oo la xiriira shaqada haweenka wadnaha.
Xididaha qalalan ma lumin pectins, sidaas wanaagsan wuxuu jirka ka ilaaliyaa saameynta taban ee biraha culus iyo raadiyahaWaxa kale oo ay ka caawisaa in la baabi'iyo jirooyinka iyo kolestaroolka jirka.
Qadarka birta ku jirta xididada, waxay ka dhigeysaa dalagga geedka labaad ka dib markii toonta loogu talagalay guryaha hematopoietic.
Xaqiiqda ah in ay lagama maarmaan tahay haddii daal ahaan iyo hoos u dhac ku yimaado maareynta ka dib markii jirradu ay ka marag fuulaan faa'iidooyinka xididdo.
Inkastoo dhammaan tayada wanaagsan ee xididdo la qalajiyey, isticmaalka wuxuu waxyeeli karaa dadka qaba cuduro kala duwan ee caloosha.
Tusaale ahaan boogta peptic iyo gastritis ayaa gebi ahaanba ka takhalusi dhammaan guryaha faa'iido leh ee xididdoiyo dadka qaba urolithiasis ayaa laga yaabaa inay dareemaan inay sii xumaanayaan.
Beetjada nooc kasta ha ahaato waxa loogu talagalay isticmaalka dadka leh nidaamyada dheef-shiid kiimikaadka ee jirka ku jira.
Qiimaha tamarta ee alaabta:
dufanka - 0.6 g;
borotiinka - 9 g;
Waa kuwee noocyada doorashada?
Dalagyada rootiga leh qashinka huurka hodanka ah ee mugdi madow waxay ku habboon yihiin qalajinta., isku-dhejisan, adigoon garaacin. Waxa ugu fiican ee qalajinta waxaa loo tixgeliyaa noocyo aan la taaban karin, Bordeaux.
Si aad u bilowdo geeddi-socodka qalajinta, waxay u baahan tahay in la diyaariyo. Si tan loo sameeyo, midhaha waa in si fiican loo maydho jilbaha jilicsan ee biyo qabta, ku shub biyo qabow oo ka baxo 1.5-2 saacadood. Taas ka dib, biyaha ku jira taangiga ayaa isbeddela oo dabka saaraa si uu u karkariyo khudaarta cagaaran.
Ka dib 20-30 daqiiqo, xididdo la kariyey ayaa mar kale lagu meeleeyaa biyo qabow. ilaa 15-20 daqiiqo. Xaqiiqda ah in dabocase si buuxda loo diyaariyey waxaa lagu muujiyay gelitaanka bilaashka ah ee cadayga ama qoryaha alwaax.
Marka sheyga si buuxda loo qaboojiyo, waa in la nadiifiyaa madaxa, xididka iyo maqaarka. Iska yaree xididada dhameysatay waxay noqon kartaa taarikado, ciriiri ama xabo (dhumucda dhinacyada lateral aan ka badnayn 0.5 cm).
Hab kale oo ka mid ah ka hor-marinta ee xididdo waa blanching. Si arrintan loo sameeyo, xididdada cayriin waa la diiriyaa, madaxa iyo lafdhabarta iyo jarjar. Xididyada la jarjaray waxaa la geliyaa biyo cusbayn leh (1 tsp, Saliid halkii 1 litir oo biyo ah) oo la jarjaray 3-4 daqiiqo, ka dibna ku qaboojin biyo qabow.
Khudradda asaasiga ah ee loo diyaariyay qaababka noocan oo kale ah ayaa la dhigayaa hal lakab. on shaashadda ama xaashida dubista oo loo diro meeshii qalajinta la sameyn doono.
Waxaa suurtagal ah in la qalajiyo xididdo labadaba habka hawadu-qorraxda, iyo foornada iyo qalajiyaha korantada.
Hawo wanaagsan ayaa lagama maarmaan u ah hawo-tayo sare leh oo qalajinta ee xididdo.. Tani waa qayb muhiim u ah geeddi-socodka, maaddaama hawo cusub waa in mar walba la keenaa khudaarta iyo hawada, oo qoyaan leh qoyaan, waa in laga saaraa.
Meesha ugu fiican waxay noqon doontaa aag furan, iftiin qorrax leh.waxayna ku taallaa meel fog. Haddii aanay suurtogal ahayn in la qalajiyo xididada meel bannaan, waxaad isticmaali kartaa balakoonka furan (iyada oo shardi ah in ay ku taal dhinaca koonfureed).
Sidaas inaad doorato meel ku taal waxaad u baahan tahay inaad meel dhigto shaandho (kiiskan, taraamijku ma shaqeyn doono), waxaa lagu daboolaa xididdo shiidan.
Waxaa muhiim ah in la xasuusto in aan qallajin karin dhulka, dhulka ama miiska - ma jiri doonto dhaqdhaqaaq bilaash ah oo hawada ah. Qashinka waxaa lagu rakibay hab noocaas ah oo hawadu u dhaqanto xayawaanka labadaba kor iyo hoosba, taas oo ah, waa in la hakiyo ama lagu rakibo taageerooyinka hooseeya.
Muddada qallajinta qallalan ee qorraxda wuxuu sameeyaa 4-6 maalmood.
Sidee loo go'aamiyaa diyaargarowga?
Beeraha Ready, si wanaagsan loo qalajiyey maroon, dabacsanaan iyo dabacsanaan.
Sidee loo xafidaa badeecada la dhammeeyey?
Meesha ugu fiican ee lagu kaydiyo xididdo qalalan ayaa noqon doonta qalalan, ka ilaali qolka qabow. Ku kaydi badeecada ku jirta weelasha ama dhalooyinka leh daboolka la xiray. Beet ayaa si wanaagsan loo xafidaa bacaha polyetylen.
Ma qalin karaa caleemaha dabocase?
Marka laga reebo dalagyada xididka, qaybta dhulka ee geedka waxaa sidoo kale lagu qallajiyaa qalajinta. - dushooda, taas oo sidoo kale ay ku badan tahay fitamiinada, macdanta iyo nafaqooyinka.
Si loo diyaariyo dusha sare ee jiilaalka, waa in si fiican loo maydho, la qalajiyo tuwaal, gooyaa oo la qalajiyey on saxan alwaax ama warqad ah kaarar cad.
Ka dib markii dhaladooda ay qalalan yihiin, waa dhul boodh iyo ku shubaa dhalooyinka dhalooyinka, kaas oo si adag loo xidhay.
Waxaa lagama maarmaan ah in laga dhigo budada laga bilaabo dhaladooda dabocase, iyo sidoo kale miraha naftooda - meel qabow, mugdi iyo qallalan.
Intaa waxaa dheer in lagu qalajiyo si dabiici ah Waxaad samayn kartaa habkan iyadoo la adeegsanayo foorno iyo qalajiye koronto.
Beet, oo ka duwan noocyo badan oo xidid khudradeed, ayaa la qalajiyaa heerkulka sare.
diyaariso xididadasida habka qallajinta dhaqameed;
faafinayaan xididdo la jarjaray oo ku qoran xaashida dubista 1-2 lakab;
saar digsiga foornadakululeeyaa ilaa 85-90 digrii;
in geeddi-socodka qalajiyo xididdo waa la isku qasi karaa 1-2 jeer;
muddada hannaanka waxay sameysaa 6-7 saacadood.
Helitaanka alaabada waxaa lagu go'aamiyaa joogteynta iyo midabka.
Sida loo qalajiyo xididada korantada korantada
Si aad u qalajiso xididdo ku qalajiye koronto, waa in loo diyaariyaa sidaas, sida hore loo soo sheegay, la jarjar gooyo badan oo ku soo shub on suuqyada qalabka.
Qalalan sida waafaqsan tilmaamaha qalabka (badiyaa xayawaanka ayaa la qalajiyey ilaa 65 digrii). Xayeysiisyada la dhammeeyey waxaa la dhigayaa bangiyada, si fiican u xiran oo loo diro meel qabow.
Isticmaal diyaarinta la mid ah waxay noqon kartaa diyaarinta cuntooyinka ugu horreeya.. Ku qooyso khudradda cagaarka ah, waxaa lagu dari karaa saliida iyo saladh qudaar ah.
Waxa kale oo aad diyaarin kartaa cabitaanka shaaha., samaynta khudaar cajiib ah ama ku dar foosto dufanku ugu badnaado cabitaanka ugu weyn. Khudaarta cufan ee la qalajiyey waxay dhadhamiyaan cajaalad cajiib ah oo ah kvass dabocase.
Waxyaabaha kale Carruur badan ayaa jecel inay cunaan macaandhalaalaya, hodan ku ah fitamiinada qoryaha la qalajiyey ama xabadaha.
Xididdo la qalajiyey: cuntada sida caadiga ah
7 kg ee xididdo dhexdhexaad ah si ay u dhaqdaan, diirka, ka saar dabo. Iska yaree xaleefyada, 5mm weyn iyo meel 3 daqiiqo biyo karkaraya.
Kaddib marka la soo saaro laga bilaabo walxaha dabocase biyaha dabka qabow, waxay ku faaftaa 1 lakab oo waraaqo duban ah oo dir foornada, oo lagu shubay 90 digrii. Ku qallaji ilaa 6 saacadood ilaa diyaar.
Xididyada la qalajiyey ee la diyaariyey waxaa la geliyaa dhalooyinka quraaradaha, si adag u xiran oo lagu kaydiyaa meel qabow mug leh oo loogu talagalay kaydinta.
Soo bixinta badeecadda dhamaysay 7 kg oo ah xididdo - 1 kg oo qalajinaya.
Tan iyo wakhtiyadii hore, xididdo iyo suxuuntaQaab dhismeedkaas oo ay ku jiraan, waxaa loo tixgeliyaa sida alaabooyinka sida ugu wanaagsan u leh qofka.
U diyaargarowga xididada jiilaalka ma raadin kartid ilo dheeri ah oo nafaqo iyo nafaqo leh. Isticmaalka joogtada ah ee badeecadan dhadhan fiican ayaa kaa dhigi doonta mid caafimaad leh oo faraxsan.
Fiidiyowga waxtar leh!